I-RC Flight Simulators - Ukukhishwa kwamahhala kunye neDemo
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Ezinye izinto zokuzilibazisa
Funda ukuza nge-RC Flight Simulation Software
Khuphela kwiDemo okanye ulayishe i-Free Sim Sim
Umntu uye wayenomdla wokubhabha kuyo yonke imbali kodwa imizamo yakhe emininzi yokudala ukuphambana kweenqwelo zendiza yayihlala idibene nenhlekelele. Nangona kunjalo, nangona senze imishini ehamba ngeenqwelo eziphambili, iphutha lomntu lisisigxina. Ukuhlala emoyeni akulula. Kuthatha ukusebenza. I-Flight-kuquka ne-RC ehambahambayo-yi-gravity-defing feat efuna umonde.
Intoni? Awufuni ukufunda malunga nokuxhamla kwendiza? KULUNGILE. KULUNGILE. Fly ngqo kwi RC Flight Simulators:
Wonke umntu: qhubeka ufunda, thabatha i-poll, kwaye ufumane iingcebiso ekusebenziseni i-RC flight simulators. Hayi, uze ukhangele yonke i-free, i-demo, kunye ne-software yesorhwebo yokufunda ukuhamba ngeenqwelo-moya ze-RC.
Xa uDaedalus enza iiphiko zeentsiba kunye ne-wax ngonyana wakhe omncinci, u-Icarus, walumkisa loo nkwenkwe ngaphambi kokuba abalekele elwandle, "ungasondeli kakhulu emhlabathini ukuba amaphiko akho abe nemvula; Ukuphakama kwamaphiko akho kwenziwe nge-wax kwaye ilanga liyakuncibilika kwaye uya kuwa ngokuqinisekileyo. " Kodwa u-Icarus, owabanjwe evuyiseni yeendiza, wahamba esondele kakhulu elangeni.
Izilumkiso zikaDaedalus zifana nokusebenza kweenqwelo zomsakazo zanamhlanje. Ukuba uyaphupha kakhulu kufuphi nomhlaba, usenokwenzeka ukuphazamiseka. Ukuba uyaphakamisa kakhulu phezulu i-RC indiza iya kuba ngaphandle kwebala kwaye awuyi kukwazi ukuyilawula. Inqwelo yakho yeRC iya kuvela esibhakabhakeni ize iqhubekele phantsi. Njengoko Icarus, nokuba kunjalo, kulula ukubanjwa ngotshaba lokubhabha.
Kodwa oku kuvuyisayo kuhamba ixesha elifutshane xa uphahlaza indiza yakho yeRC emva kwemizuzu embalwa ephakama.
Ngaphambi kokuba uthathe indiza yakho entsha ye-RC ukuvavanya-ukuhamba-moya, okanye nangaphambi kokuba uthenge i-RC okanye i-helicopter yakho yokuqala, kuya kuba luncedo ukutyalomali kwezinye izifundo ezindizayo. Ndifuna ukundiza kodwa, njengenhlanhla kunye nekhono, "Andiyena umqhubi!" Ndiye ndiphazamise zonke iindiza endiziphetheyo, ezinye ziphakathi kwemizuzu nje yokucima.
Funda kwiimpazamo zam. Fumana amaphiko akho kunye ne-RC flight simulators kunye ne-aircraft.
Ndifumene iindidi zeenqwelo-moya ze-RC ezinokukhululeka ukukhuphela. Ezinye zikhululekile ngokupheleleyo. Ezinye ziinguqulelo zeememo. Okanye, gxuma kwiinyawo zokuqala nge simulator yendiza yeentengiso ze-RC ngokugcwele njenge-RealFlight G4. Zama enye yalezi zifundo kwaye ufunde ukuhamba ngeenqwelo ze-RC kunye nee-helicopter ze-RC ezikhuselekileyo kwikhompyuter yakho.
Ezi ziLimo zeMoto zeRC ziquka i-FMS yamahhala kunye neyona siseko (kodwa ikhululekile) I-Manuel's Radio Control Flight Simulator. Kukho iinguqulelo zeedemo zeRC Plane Master kunye neenkqubo eziliqela ezibandakanya iindiza kunye neenqwelo-moya.
Ezi ziquka iinguqulelo zeedemo ze-ClearView, RealFlight G4, kunye ne-RC Flight Master eXtreme64.
Zama ukuza ngaphambi kokuba uthenge
Ukuthenga ii-airplane ze-RC kunye ne-helicopter kwaye ukufunda ukuhamba kunye nabo kuyindleko kwaye mhlawumbi kuya kudanisa. Ukuziqeqesha nge-RC flight simulators yindlela efanelekileyo yokufunda ukundiza ii-RC. Ngoko ngaphambi kokuba uphume apho kwaye uthenge i-aircraft ye-RC kwaye uchithe itoni yexabiso endaweni yalo ixesha nangesihlandlo ngenxa yokuphazamiseka ezininzi, funda kwaye uziqeqesha kwimigaqo ye-RC indiza. Olu lungiselelo lungakhokelela kumava amade kwaye anandiphayo kwiiplanethi zeRC ezindizayo.
Okulandelayo: Tshintsha umlawuli weCandelo loLawulo lweRC
Yonke into ngeRadio Controlled (RC) Izithuthi
FAQs: Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiweyo malunga neRC Vehicles, iphendulwa
I siseko: Iintlobo, iiNxalenye eziPhambili, kunye neeRC zokuSebenza
Ukuthenga iRC: Indlela yokukhetha iViyo eLawulayo iRadio
Ukulungiswa kunye nokuPhuculo: Ukugcina, Ukulungiswa, nokuguqula iRC Vehicles
Iprojekthi yokufanisa ye-RC yendiza iza kunye neenqwelo zeenqwelo ze- RC kunye neziza ezindizayo ezinokukunceda ukuba uphinde uphinde uphinde uphumelele. Kodwa inxalenye ye-RC yamava okubhabha izixhobo osebenzisa ukulawulwa kweenqwelo-moya - umlawuli wakho womsakazo.
Ukulinganisa i-RC Plane Controller
Ukuba usebenzisa i-FMS okanye enye i-software ye-RC ekhuphayo eyayixhasayo, ndincoma ukusebenzisa umlawuli ophethe iinjabulo ezimbini ze-analog ezinjengezo zifumaneka kwi-PlayStation. Ezi zi sebenza ngakumbi njengabalawuli beenqwelo ze-RC zangempela kunye neenqwelo-moya. Abalawuli bepad game bajikeleze i-$ 15- $ 20 kwisebe le-electronics kunye nezemidlalo kwiivenkile zokuthengisa zendawo.
Ezinye zale simulators zendiza ze-RC ziya kusebenza kunye nomlawuli wakho we-RC nje kuphela xa umlawuli wakho edibanisa i-cable interface (njenge-USB okanye i-serial) edibanisa umlawuli kwikhompyutha yakho. Abanye beza nabalawuli be-transmitter zangempela okanye i-adapters yeekhamera kwiindidi ezahlukeneyo zokuthumela.
Okanye, unokuya kwisitoreji sendawo yokuzonwabisa ukuze uthenge umlawuli wokuqeqesha onesofthiwe yokuqeqesha i-RC. I-RealFlight i-Flight Simulators ngeeSicwangciso eziPhambili ziza kunye namawaka eekhilomitha ezindiza ezindizayo, ukurekhoda kwendiza kunye nezixhobo zokudlala, izongezo zeenqwelo ezininzi kunye neziza ezindizayo, kunye nomlawuli we-InterLink Plus osebenza njengomlawuli we-aircraft weRC okanye unokuxhumeka kuwe thumela.
Inomxholo we-demo olawulwa yikhibhodi yakho. Ayikho into eyenziwa yinto yokukhwela kwangempela, kodwa ikuvumela ukuba usampule isofthiwe. Hlola kunye nezinye i- RC Airplane Flight Simulators .
Ukulingana no-Real RC Flight
Iprojekti yokufanisa i-Flight ayiqinisekisi ukuba awusoze wanyuka kakhulu okanye uphakame kakhulu. Akuyi kuphelisa ngokupheleleyo ukuphazamiseka. Kodwa yindlela enye yokukunceda ufumane ukuzonwabisa okuvela kwi-RC yakho ye-flying experience ngokukunika ukuzithemba ngakumbi, ukuziphatha okukhuselekileyo, kunye nokuvumela ukuba ukhululeke ngokulawula i-airplane ye-RC. Xa uthabatha inqwelo yakho yokuqala yangempela yeRC uza kuba nolwazi oluhle malunga nendlela yokulawula i-RC okanye i-helicopter yakho.
I-Flight Virtual, Real Fun
Iimpawu zeemoto ze-RC, njenge-software ye-RC yokugijima, akufunanga nje ukufunda indlela yokusebenzisa i-RC indiza okanye i-helicopter. Ngexesha lokuphumula eofisini, emva kobumnyama, okanye kwimvula okanye kwiintsuku ezinomoya xa ungeke ukwazi ukundiza into eyinyani, qhafaza i-simulator ye-RC yakho yendiza yeyona nto inomtsalane.
Ukulinganisa i-RC i-Helicopter Skills
Ndingumqhubi wecala lokudlala i-helicopter.
Ndifunda ukundiza ii-helicopter zeRC.
Ndingumchwepheli weRC helicopter.
Jonga iziphumo zePoll
Ndingayifumana njani i-RC Race Track Track?
Iiprogram eziPhakathi kunye neeProgram eziphambili ze-RC
RC Imidlalo yeMidlalo
Izakhono zokuQala kweR Rock
Izicwangciso ze-Airplane ezi-Easy-Build RC
Izilwanyana ze-RC ezikrakra neenambuzane
I-AP yoRhulumenteni we-US kunye nezoPolitiki
Isikhokelo kwiimpawu ezi-7 zehlabathi elidala
Yeka ukutshatyalaliswa kwabakwa-Cheerleaders
UTeddy Roosevelt Ululaza ukuPelisa
Intsingiselo yesiNgqungquthela saseFransi "La Lune de Miel" - I-Honeymoon
Uhambo luka-Angie kwiSitha
I-albhamu ye-Top 10 Classic Pop yeKrisimesi
Imibuzo Yokubonga yabantwana
Isicwangciso esiSisiseko Sokusindiswa kwethu (Ulonwabo) ngokufutshane
I-Seton Hall Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Pachycephalosaurs - I-Dinosaurs ye-Bone-Headed
Imifanekiso yamaSulumane - Assalamu Alaikum
I-Gear Key for Scuba Diving
I-Biology Prefixes kunye neSaffixes: i-epi-
Iinkonzo kunye neNgxowa-mali yoLwazi lweSekondari